चैत्र १२ गते, २०७१ बिहिवार
26th March, 2015 Thu १२:१०:०५ मा प्रकाशित
हास्य कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ तथा हरिवंश आचार्यले राजधानीको एउटा नाट्य प्रहसनमा यस्तो भजन गाएको सुनियो, – ‘ईश्वर तिमीले जगत् बनायौ जगत्मा सुन्दर नेपाल बनायौ यही नेपालमा हिमाल खन्यायौ, पहाड खन्यायौ एउटा राम्रो नेता दिन किन तिमीले टाउको कन्यायौ ?’ उपरोक्त पंक्तिले मुलुकमा असल राजनेता नहुँदा देश बन्न नसकेको दुखेसो पोखेको छ । साथै यसले तीखो राजनीतिक व्यंग्य पनि गरेको छ । त्यसो त मह जोडीका अधिकांश प्रस्तुतिहरु चोटिला हुन्छन् । ती सन्देशमूलक हुन्छन् । ती राजनीतिक, सामाजिक व्यंग्यमिश्रित नै हुन्छन् र तिनले निकै लोकप्रियता पनि कमाएकै छन् । तथापि यस्ता प्रहसनले केवल गुनासो र असन्तुष्टिहरु मात्र उजागर गर्छन् कि तिनले उपयुक्त सोलुसन पनि पस्कने क्षमता राख्छन् ? यो भने प्रमुख विषय हो । के नेपालमा नेता जन्मिनै नसकेको हो अथवा नेतालाई टिकाउन नसकिएको हो ? कतै आग्रह र पूर्वाग्रहकै भारी बोकेर राजनीतिक नेतृत्वको निर्माण गर्न खोज्दा त्यस्तो नेतृत्व जन्मन नसकेको त होइन ? कतै नेताहरुलाई हाम्रो सामाजिक परिवेश र त्यसले निर्माण गरेका अस्वभाविक अपेक्षाहरुले त्यो उचाइसम्म पु¥याउन नसकेको त होइन ? कतै हामीले नै हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वलाई बिगारिरहेका त छैनौं ? कतै हामीले नै उनीहरुलाई गलत तरिकाले प्रयोग त गरेका होइनौं ? अनि नेता र नेतृत्व पनि त्यही समाज र सामाजिक जीवनमा घुलमिल भएरै जन्मने हु“दा हाम्रै आचरण र व्यवहारले नेतृत्व निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको त होइन ?अनि नेता मात्रै खराब हुने, बा“की सबै असल संभव छ ? प्रश्न उब्जिन्छ । एउटा नेपाली लोकगीतले भनेझैं उत्तर सहज छ – ‘नेतालाई गाली गर्दैमा नयाँ संविधान बन्दैन’ हो, हामीले अहिलेसम्म राजनीतिक नेतृत्वलाई गालीमात्रै गर्न जानेका छौं । यिनले देश बनाएनन् भनेर गुनासो मात्रै गरेका छौं । अनि नेताहरुलाई आदर्शको पर्याय मात्र बनाउन खोज्यौं । हामीले उनीहरुबाट अपेक्षा मात्र ग¥यौं । तर, समाजमा राजनीतिक नेतृत्वलाई स्थापित गर्नका लागि उनीहरुलाई सहि ढंगबाट खबरदारी गर्न सकेनौं । हामी पनि आफ्नो सीमित स्वार्थको घेराबाट माथि उठ्न सकेनौं र आफ्ना दलीय अझ गुटगत स्वार्थमा अल्झिएर नेतालाई प्रयोग मात्रै गर्न खोज्यौं । अनि अर्को फरक विचार राख्ने संभावनायुक्त नेतृत्वलाई दलीय असहमतिकै कारण सधैं दुत्कार्ने काम मात्रै गर्यौं । यहि प्रवृत्तिले गर्दा मुलुकमा अग्रगामी विचार बोक्ने दूरगामी राजनीतिक नेतृत्व जन्मन सकेन । जसले आजको होइन ५० वर्षपछिको नेपाल देखोस् र त्यसलाई बनाउन लागोस् ।
हामी मोदीको चामत्कारिक नेतृत्व क्षमताको फ्यान नहुने कुरै भएन । परिणामतः हामी समानान्तर ढंगबाट नेपालमै पनि ‘मोदीको व्यक्तित्व’ खोजिरहेका छौं ।
अनि हामीलाई जहिल्यै पनि नेता र नेतृत्वको अभाव खड्किने गरेको छ । त्यसैले कोही चर्चामा आउनेवित्तीकै हामीलाई उसको व्यक्तित्वले तानिहाल्छ, आकर्षित गरिहाल्छ । अनि भन्छौं नेता होस् त फलानो जस्तो । जसै भारतमा नरेन्द्र मोदीको उदय भयो, नेपालमा पनि नरेन्द्र मोदीको खोजी सुरु भयो । अझ हामी त उनको चामत्कारिक ढंगबाट सबैलाई सम्मोहित पार्ने भाषणकला र ‘बोल्ड पर्सनालिटी’ को त फ्यान नै बन्यौं । त्यसमाथि नेपाललाई हेर्ने भारतीय संस्थापन पक्षको पुरानो ‘ब्युरोकेटिक’ दृष्टिकोणलाई मोदीले नेपालको भ्रमण गरेसँगै राजनीतिक तहमा विकास गर्न जुन पहलकदमी गरे, त्यसले उनीप्रति नेपालमा एक खालको सदासयता उत्पन्न भएको छ । अनि हामी मोदीको चामत्कारिक नेतृत्व क्षमताको फ्यान नहुने कुरै भएन । परिणामतः हामी समानान्तर ढंगबाट नेपालमै पनि ‘मोदीको व्यक्तित्व’ खोजिरहेका छौं । उता मोदीको क्रेज कम हुन नपाउँदै अरविन्द केजरीवालको एपिसोड सुरु भयो । जसै उनको नवगठित आम आदमी पार्टीले गत फेब्रुअरीमा सम्पन्न दिल्ली विधानसभाको चुनावमा अप्रत्यासित ऐतिहासिक बहुमत ल्यायो र त्यसले केजरीवाललाई दिल्लीको मुख्यमन्त्री बनाइदियो, हामी फेरि तुरुन्तै उनको फ्यान बनिहाल्यौं । अनि नेपालमा पनि फेरि केजरीवाल र आम आदमीको खोजी सुरु हुन थाल्यो । अघिल्लो दिनसम्म चल्तीमा रहेको मोदीगफ एकाएक केजरीवालतर्फ मोडियो । यसरी नेता खोज्ने क्रममा अहिले हामी आधुनिक सिंगापुरका निर्माण ली क्वान यूलाई खोजीरहेका छौं । किनकि केही दिनअघि उनको मृत्यु भएस“गै हामी एकाएक उनको नेतृत्वबाट द्रवीभूत भएका छौं । अब हामीलाई मोदी, कजेरीवालले पुगेन र ली क्वान चाहिएको छ । तर, हामी निराश छौं किनकि हामीसँग ली क्वान छैनन् । हो, यसरी हामीलाई नेता खोज्नु परेको छ र नेता खोज्दा निराशा मात्रै हात लाग्ने गरेको छ । हामीले हाम्रा नेतागणहरुमा कहिले ‘मोदी’ को चामत्कारिक व्यक्तित्व खोज्छौं, कहिले ‘केजरीवाल’को आकर्षण त कहिले ‘ली क्वान’को विकास चेतना । तर अहँ इतिहासका कालखण्डहरुमा ती नेतृत्व कसरी जन्मिए र तिनलाई कसरी टिकाइयो ? उत्तरका लागि कहिल्यै घोत्लिन जानेका छैनौं । नेता, नेतृत्व र व्यक्तित्वको खोजी त गरेका छौं, तर त्यो व्यक्तित्व कसरी निर्माण हुन्छ, अहँ पत्तै पाएका छैनौं । के हामीले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वलाई त्यो हैसियतमा पुर्याउने पहल कहिल्यै गरेका छौं ? अहँ छैन, बरु हामी नेतृत्वलाई खुइल्याउन तल्लीन हुन्छौं । यदि कुनै अमूक व्यक्तिले मुलुकको परिवर्तनका लागि नेतृत्व गरेर आएको छ, उसले केही नयाँ कुरा दिने क्षमता राख्छ भने उसलाई राजनीतिक दूराग्रहका आधारमा दुत्कार्ने गर्दर्छौं । अनि उसलाई खुइल्याउनमै मजा मानिरहेका हुन्छौं । त्यसैलाई आफ्नो धर्म बनाइरहेका हुन्छौं । विभिन्न उखान, टुक्काको सहाराले राजनीतिक नेतृत्वको उछितो काड्न भरमग्दुर प्रयत्न गरिरहेका हुन्छौं । हामीलाई त्यही कुरा रमाइलो लाग्छ र मजा पनि आउँछ । अनि हरबखत हामी त्यसैको पछि दगुरिरहेका हुन्छौं, मानौं उखान टुक्का र ठट्यौली नै हाम्रो जीवन शैली हो । नेपालले किन अहिलेसम्म दृढ, आत्मविश्वासी र दूरगामी नेतृत्व पाउन सकेन ? यसका पछाडि हामीमा विकसित हुन नसकेको राजनीतिक संस्कार नै मुख्य दोषी हो । विपक्षीहरुको अस्तित्वलाई कहिल्यै पनि स्वीकार नगर्ने अनि जहिल्यै पनि सत्ताको छिनाझपटीमै रुमल्लिने राजनीतिक संस्कारले मुलुकमा असल नेतृत्वको निर्माण हुन सकेन र यसको संभावना पनि न्यून हुंदै गएको देखिन्छ । के यसका लागि राजनीतिक दलहरु र तिनका नेताहरु मात्रै दोषी होलान् त ? २०६२/०६३ को राजनीतिक संघर्षका क्रममा सबैले स्वीकार्य नेतृत्वको रुपमा कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला स्थापित भएका थिए । उनको नेतृत्वलाई राज्यविरुद्ध हिंसात्मक युद्ध लडिरहेको नेकपा माओवादीले पनि स्वीकार गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो । जीपी कोइरालाको निधन भएसँगै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड मुलुककै नेताको रुपमा उदाउने संभावना भने कायमै थियो । तर, २०६३ को परिवर्तनपछि जसरी नेकपा माओवादीको नेतृत्व संभावनाका साथ उदाएको थियो, त्यसलाई त्यही रुपमा सबैको साथ, समर्थन र सहयोग भएन । बरु त्यसले भय उत्पन्न गरिदियो र समाजको एउटा तप्का पूरै माओवादी विरुद्ध मोर्चाबन्दीमा उत्रियो । अनि तत्कालीन रुपमा चुनावी परिणामले खुम्चिन पुगेका एमाले–कांग्रेसले पनि त्यही अभियानलाई साथ दियो । यदि माओवादीको शान्तिपूर्ण राजनीतिक रुपान्तरणलाई राजनीतिक वृत्तमा सहज र सकारात्मक ढंगबाट लिइएको हुन्थ्यो र संक्रमणकालीन नेतृत्वलाई स्वीकार गरिएको हुन्थ्यो भने यो दश वर्षको अवधिमा मुलुकले एउटा खालको कोर्स पूरा गरेको हुने थियो । तर, नेपालको राजनीति त्यो आदर्शले त्यो आदर्शको मार्ग अवलम्बन गर्न सकेन ।
प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाको ‘सुस्त’गतिले मुलुक चुप मात्र होइन ‘ठप्प’ भएझैं देखिन्छ । हो, मुलुक अहिले तदर्थवादमा चलिरहेको छ, तदर्थवाद कुनै गति होइन । यसले फगत एक खालको नयाँ भ्रमको सृजना मात्रै गरेको छ ।
माओवादी नेतृत्वमा पनि त्यसयता सत्ताको उन्माद चढ्दै गयो र नेतृत्व स्खलित हुँदै गयो । त्यहींबाट एउटा संभावित नेतृत्वको विनिर्माण सुरु भयो । र, अहिलेसम्म पनि हामी त्यही नेतृत्वको अभाव झेलिरहेका छौं । मुलुकमा राजनीतिक दलहरु छन्, दलका नेताहरु पनि छन्, सरकार छ, प्रधानमन्त्री पनि छन्, तर मुलुकमा उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्व छैन । कुनै पनि देशको राजनीति र राजनीतिक नेतृत्व सदैव गतिशील हुनैपर्छ । अहिले मुलुक लम्बिँदो संक्रमणबाट आक्रान्त छ । तर, मुलुकलाई गतिशील बनाउन अर्थात् मुलुक ‘ज्यूँदो’ भएको आभास दिने नेतृत्व छैन । खासगरी २०६३ सालयताको राजनीतिक परिदृष्यलाई हेर्ने हो भने केही अपवाद बाहेक मुलुकले गतिशील नेतृत्व नै पाउन सकेन । अहिले झन् प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाको ‘सुस्त’गतिले मुलुक चुप मात्र होइन ‘ठप्प’ भएझैं देखिन्छ । हो, मुलुक अहिले तदर्थवादमा चलिरहेको छ, तदर्थवाद कुनै गति होइन । यसले फगत एक खालको नयाँ भ्रमको सृजना मात्रै गरेको छ । जसै पहिलो संविधानसभाको अवसान र दोस्रोको उत्पत्ति भयो, त्यसले राजनीतिलाई पुरानै विन्दुमा फर्काइदियो । अनि राजनीतिको परिदृष्यमा देखिएका हक, अधिकार र पहिचानका अनगिन्ती मुद्दाहरुको भविष्य के हुने हो ? के यी मुद्दाहरु संस्थागत हुन्छन् ? के मुलुकमा उदाएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुन्छ ? के पहिचानसहितको संघीयता लागू हुन्छ ? के राज्यको दमन र उत्पीडनमा परेका नागरिकहरुले आफ्ना हकअधिकार स्थापित भएको संविधान पाउन सक्छन् ? के जनयुद्धको सार्थकता प्रमाणित हुन्छ ? ती भोका नाङ्गाहरुको पेट र आङ भरिन्छ ? यी सबै प्रश्नहरु अहिले मूल्तवीमा छ । थाहा छैन, बहुमतको गीत गाइरहने सत्ताधारी दलहरुले संविधानसभामा ती प्रश्नहरुको उत्तर खोज्नेछन् वा छैनन् । ती प्रश्नहरुको सटिक र सहज जवाफ अहिलेको संक्रमणमा पाउन गाह्रो छ । यद्यपि अब बन्ने भनिएको संविधानले ती यावत् प्रश्नहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्दछ ? त्यसैमा यो देशको भविष्य पनि जोडिएको छ । अनि नया“ नेतृत्व निर्माणको प्रश्न पनि यिनै मुद्दाहरुको सम्बोधन र व्यवस्थापनको कसीबाट सुरु हुनेछ ।
सिथिल अर्थतन्त्र कसरी उकास्ने ?
तालिबानद्वारा अफगानिस्तानका घरघरमा खानतलासी : राष्ट्रसङ्घ
कोरोनाले अक्सिजन घट्यो ? अस्पताल र अक्सिजन पाउनु भएन ? यो औषधि खानुस –डा. अनुप सुवेदी
काठमाडौंका धार्मिकस्थल दर्शन र पूजाआजामा रोक
प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट: पुलिस क्लब फाइनलमा प्रवेश
प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट : पुलिस क्लब फाइनलमा
भारतमा थप २ लाख ३८ हजार नयाँ सङ्क्रमित
सर्वोच्च अदालतका ३५ जना कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण